Robert Yamate : Hotohizana ny fanampiana an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaRobert Yamate : Hotohizana ny fanampiana an’i Madagasikara
01/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Hotohizana ny fiaraha-miasa ary hamifisina orina ny fiaraha- miasa amin’ny fanjakana Malagasy, ahafahan’i Madagasikara mahita fampandrosoana” io no nambaran’ny masoivoho Amerikana nandritra ny fankalazana ny faha- 241 nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany sy ny faha- 150 taona nisian’ny fifandraisana teo amin’ i Etazonia sy i Madagasikara omaly tetsy amin’ny trano fonenan’ny masoivoho amerikana tetsy Ambaranjana. Mazava ihany koa androany ny kabarin’ ny masoivohon’i Etazonia Robert Yamate fa hitohy hatrany ny fanampiany an’i Madagasikara satria dia mipetraka eto izao ny fanajana ny demokrasia “amin’ izao fanohizan’i Madagasikara ny fametrahana sy ny fanamafisana orina ny demokrasia marin-toerana eo aminy izao, dia hijoro ho mpiara-mientana aminy hatrany i Etazonia,tahaka izay 150 taona lasa izay”. Nandritra ny kabariny, nanamafy ny masoivoho Amerikana fa mbola vonona izy ireo ny hamatsy an’i Madagasikara noho ny ezaka izay ataon’ny firenena sy ny mpitondra « hanohy hiasa amin’ny alalan’ny USAID hatrany izahay ka hamatsy vola ireo ezaka atao”. Tsiahivina ireo fanampiana izay efa azon’ i Madagasikara mitentina 66 tapitrisa Dolara satria vao ny herinandro lasa teo izao no nanolotra 33 tapitrisa Dolara ny amerikana ho an’ny fandaharan’asa momba ny rano toraka izany ihany koa ny fanomezana vola 33 tapitrisa Dolara ihany ho an’ny fahasalamana.
Hanana anjara lehibe amin’ny fanampiana azo avy amin’ny amerikana ihany koa ny tafika Malagasy, satria dia hisy ny fiofanana izay ho azo ary ho tonga hatrany amin’ny fanazaran-tena miaraka izany. Tsy vitan’ny fiofanana ihany anefa, hoy ny masoivoho amerikana Robert Yamate, fa hatramin’ny fanomezana fitaovana ihany koa, toy ny efa santatra am-bavarano tamin’ny fanomezana sambo haingam-pandeha “Metal Shark Patrol” hahafahana manara-maso ny sisin-dranomasin’ i Madagasikara. Eo ihany koa ny fanohanana mivantana amin’ny fandefasana ireo tsara sitra- po izay miisa 150 aty Madagasikara, izay mampianatra ny teny Anglisy. Anisan’ny nasian’ny masoivoho Amerikana teny ihany koa moa ny mikasika ny fifidianana amin’ny taona 2018, izay fifidianana tokony ho lavitry ny korontana. Nalainy tahaka tamin’ izany ny fifidianana nisy tany Amerika izay nahalany an’i Donald Trump ho filoha nefa ity farany dia tsy fantatra firy teo amin’ny sehatra politika, ka maro ireo Amerikana no diso fanantenana.
Ankilany, ny solontenam-panjakana maro izay tonga nanatrika ity lanonana ity, notarihin’ny ministry ny fiarovam-pirenena Gal Rasolofonirina Beni Xavier nisolo tena ny fitondram-panjakana nanotrona ny lanonana ”arahabaina ny vahoaka amerikana ary mitondra ny teny aho misolo tena ny filoham-pirena Malagasy Hery Rajaonarimampianina”. Notsiahivin’ ny ministry ny fiarovam-pirenena ihany koa ny fiaraha-miasa izay efa mafy orina, ka ohatra noentiny tamin’izany ny nanomezan’ny Amerikana fanampiana 8 tapitrisa Dolara, hijerena manokana ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra Atsimo sy ny 832 tapitrisa Dolara ho an’ny rano fisotro madio. Eo amin’ny lafina ara-toe-karena dia teo ihany koa ny fanitarana ny AGOA ho amin’ny taona 2025. Azo lazaina eto fa mafy orina tanteraka ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Tonga nanotrona ny lanonana moa ireo olo- manankaja maro sy mpiara-miasa akaiky amin’ny firenena amerikana.
Ireo izay tsy nanaraka ny raharaham-pirenena tato anatin’ny roa taona ihany angamba no taitra tamin’ny filatsahan-kofidian’ny filohan’ny SMM amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nazava hatrany am-boalohany fa misy ambadika politika ireny fihetsika nasehony ireny, ary misy ...Tohiny